Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Waa Maxay Isbedelka Socda Ee Dhamaadka Qasabada?
2020 / 09 / 30 QoondayntaTilmaamaha qasabada 16165 0
Liisteena ugu weyn ee u janjeera qasabadaha 2020 waa halkaan! Mid ka mid ah waxyaalaha badan ee laga fekerayo marka la dooranayo jikada ugu fiican ama qasabadda suuliga, qurxinta ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Sanadka 2020, waxaad arki doontaa qaabab isku dhafan, midabyo, iyo qaabab casri ah oo casri ah. Hoos ka aqriso si aad uhesho waxyaabaha ugu fiican ee dhammeystiraya 5 qasabadaha kuwaas oo doonaya inay qaabeeyaan suuqa 2020.
1. Matte madow
Sannado badan, matoorka madow wuxuu ku sii jeedaa aagagga warshadaha waaweyn. Dhawaanahan, iyada oo lagu horumarinayo dariiqooyinka jilicsan, naqshadayaasha gudaha waxay ku darsadeen qasabado madow qoyan guryaha. Waa maxay habka ugu weyn ee loo soo saaro musqusha ugu yar laakiin moodada badan marka loo eego shaqaalaynta qasabad madow oo matte ah. Si aad uhesho muuqaal heer sare ah oo xasaasi ah, u soo bandhig alaabta rustic aagga. U dooro dharka maqaarka ama saxarada jikada ee alwaax si aad u hesho muuqaal cusub oo muuqaal ah
2. Dahab Dahab ah
Dhamaadka biraha ahama iyo qalabku waa wax la soo dhaafay. Waxaa lagu beddelayaa naxaas champagne iyo dahab xarrago leh oo qurux badan, muuqaal heer sare ah. Adeegsiga tuubbo midabkeedu yahay dahab midabkeedu abuuri doono muuqaal quruxsan oo casriyeysan jikada ama musqusha. Niyadjab xoog leh oo loogu talagalay xulashada casriga casriga ah ee loogu talagalay qalabka dahabka ee burushka. Dhamee muuqaalka adigoo ku dhajinaya buluugga iyo midabbada cad ee jilicsan meesha. Midabadaani si wanaagsan ayey u wada shaqeeyaan si ay midba midka kale u kaabto. Isku-darka midabka ee caddaanka iyo dahabiga ah ayaa ka dhigaya booska mid ifaya oo faraxsan.
Dhab ahaan sida dahabku u dhammaado, aluminium kulul ayaa bilaabaya inuu helo caan oo mid kasta oo ka mid ah nashqadeeyayaasha ugu fiican ayaa ku boodaya isbeddellada. Maarta diiran waxay abuurtaa bayaan taariikhi ah iyada oo loo marayo midabka iyo qaabka. Si aad uhesho qaadasho cusub, kudar qaabaynta guridda gurigaaga adoo ka hirgalinaya waxyaabo dabiici ah aagga. Isku xidho saxanka aluminium diiran oo leh qasabadaha caadiga ah si aad uhesho muuqaal jilicsan. Naqshaddan dhammaystiran ee caadiga ahi waxay si fiican ugu habboon tahay dhowr palettes. Waxay siisaa taabasho diiran oo soconaya jikadaada sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad indhahaaga u soo jeediso faahfaahinta sida xoogaa farshaxan ..
4. Dahab Dahab ah
Hal-abuurnimadu ma laha xuduudo dhismeyaasha iyo milkiilayaasha guryaha ayaa muddooyinkii dambe soo bandhigayay dhammaystirka dahabiga ee naqshadahooda. Dahabka Rose waa midab cusub oo keena diirimaad iyo hanad leh dheelitirka u dhexeeya soo jiidashada iyo dhalaalka. Midabkiisa cajiibka ah iyo codad dhexdhexaad ah oo dhadhan fiican leh ayaa siinaya astaamo u gaar ah iyo muuqaal dhiirranaan leh. Tani waxay ka dhigaysaa xoogaa bar-tilmaameed heer sare ah aag kasta oo gudaha ah. Ka kooban agabyo kale oo dahab ah oo la hagaajiyay iyo waxyaabo isku dhejisan sida gacan qabashada iyo baararka tuwaalka jikada ama musqusha si aad u hesho muuqaal quruxsan oo casri ah.
5. nikkel caday
Noocyada caadiga ah ayaa raacaya marka la bixinayo waxqabadka ugu sarreeya iyo qaababka casriga ah. Qaabdhismeedyadeeda aan waqtiga lahayn iyo kuwa rogrogmi kara ayaa looga faa'iideysan karaa ama qaab fudud ama naqshad jikada iyo musqusha. Nickel waxaa ku jira dhammeyn muddo-dheer ah waana la nadiifin karaa. Muuqaalka 'nickel' ee aan waqtiga lahayn wuxuu ku darayaa dabeecad iyadoo qolka lagu ilaalinayo si fudud oo nadiif ah. Nidaamkaaga caadiga ah ee midabkaagu wuu shaqeyn doonaa si ganaax ah, waana sababta sababta nickel-ka caadiga ahi u yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu kulul ee midabbada qasabka ah ee sannadka 2020.
Hore:: Farsamaynta Deganaanshaha: Habab fudud oo kor loogu qaado bakhaarka jikada - Salisbury Submit Next: Hagaha Rakibaadda Musqusha Musqusha
2021 / 01 / 28 18407